कपिलवस्तुको तिलौराकोट शाक्यवंशीय प्राचीन राजधानी हो । यो भगवान् गौतमबुद्धका पिता शुद्धोदनको राजधानी सहर थियो । राजकुमार सिद्धार्थले २९ वर्षसम्म यहीँ बिताएका थिए । त्यति बेला (२६ सय वर्षअघि) यहाँ राजा शुद्धोदनले सुनको हलोले जोत्दै राजकीय धान रोपाइँ मनाउने गर्थे । धुमधामले मनाइने यस्तो रोपाइँलाई मंगलोत्सव भन्ने गरिन्थ्यो ।
मानिसहरू दिन प्रतिदिन वातावरण विनाश गर्दै गइरहेका छन् । उनीहरू आफ्नो फाइदाका लागि रूख काट्छन् र घर बनाउँछन् । आफ्नो बासस्थान बनाउँदा अरूको बास उखेलिएको उनीहरू बुझ्दैनन् ।
म फूल हुँ
कलिला छन् मेरा कोपिला,ठूलो हुनु छ अझैफैलाउनु छ आफ्नो वासना,फूलबारीको यो आँगनमा ।
वर्षायाम लागेपछि,ठूलो पानी पर्‍यो ।मूल फुटी पहाडबाट,सुन्दर झरना झर्‍यो ।
मानिस हो यो धर्तीको वरदान,जसले गर्छ सबै कुरा पाउन सम्मान ।मानिस हुन् फूलबारीका फूल,जहाँ पनि जान्छन् बनाउँछन् हूल ।।
यतिबेला निकै गर्मी छ । वैशाखदेखि भदौसम्मै गर्मी हुन्छ । बाहिर निस्केर घाममा हिँड्न गाह्रो पर्छ । कोठाभित्र पनि पंखा चलाएर बस्नुपर्छ । चिसोचिसो खानेकुरा खानुपर्छ । कपडा पनि पातला लगाउनुपर्छ । गर्मी छल्न रूखको छहारीमा बस्नुपर्छ ।
नृत्यमा कत्तिको सोख छ ? पोखरामा त नृत्य सिक्ने साथीको संख्या बढ्दै छ । नृत्य सिक्न चाहनेलाई सघाइरहेको छ– सहारा अनुशीलन कला पाठशालाले । रानीपौवास्थित यो पाठशालामा १४ वर्ष अघिदेखि नृत्य सिकाउन थालिएको हो । यहाँ नृत्य सिक्न ५ वर्षका बालबालिकादेखि किशोरकिशोरी, युवायुवतीसमेत पुग्छन् ।
राजधानीको शान्तिनगरस्थित बेबिलोन नेसनल स्कुलले ‘दोस्रो बेबिलोन उपत्यकाव्यापी अन्तरविद्यालय राष्ट्रिय नृत्य तथा वाद्यवादन प्रतियोगिता– २०७५’ आयोजना गरेको छ ।
हिमांशु र साक्षात्का मामा इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो । उहाँ अकाशमा उड्ने मेसिन बनाउनुहुन्थ्यो । एक दिन मामाले भान्जाभान्जीलाई आकाशमा उडाउने विचार गर्नुभयो । मामाको विचार सुनेर उनीहरू खुसी भए ।
१) झार्छ आासु, दिन्छ उज्यालो के हो ?
लाग्यो अब झरी
खोलानाला बढेका छन्तर्ने होला कसो गरी ?जताततै हिलैहिलोलाग्यो अब झरी ।
वृद्ध हुनुभयो तर गर्नुहुन्छ अनेक धामा,कला अनि सीपकी धनी मेरी हजुरआमा ।
बाघ र बाबा
एक दिन एउटा टाटे बाघ दौडिँदै आएर जंगलमा तपस्या गर्न बसेका बाबाको कुटी छेउमा भ्वाक्क पछारिन्छ । त्यो बाघलाई सिकारीको गोली लागेको हुन्छ । सिकारीहरू त्यो बाघलाई लखेट्दै आइरहेका हुन्छन् । बाबाले बाघलाई सिकारीहरूको नजरबाट बचाउँछन् । शरीरमा लागेको गोली निकाल्छन् । औषधिमूलो गर्छन् र उसको जीवन रक्षा गर्छन् ।
मेरो एसईई अनुभव
नमस्ते, म नवदीप सिंह बस्नेत । काठमाडौंको दक्षिणकाली नगरपालिका ५, डल्लुस्थित एक साधारण परिवारको सदस्य हुँ । नर्सरीदेखि कक्षा १० सम्म ग्रिन हिल स्कुल, दक्षिणकालीमा पढेँ । विद्यालयमा मलाई सबैले जेहेनदार छात्र मान्थे । पछिल्लो समयमा मैले स्कुल ब्वायको जिम्मेवारीसमेत पाएको थिएँ । घरमा आमा, ठूलो बुबाआमा र मामाघरमा मामा–माइजू शिक्षण पेसामा नै हुनुभएकाले उहाँहरूको मार्गदर्शनमा मलाई राम्ररी सिक्ने अवसर मिल्यो । बुबा पुस्कल बस्नेत र आमा शारदा बस्नेतले मलाई हुर्काउन बढाउन र शिक्षा दिनमा कुनै कसर बाँकी राख्नुभएन ।
हजार माइलको यात्रा
विश्वकप राजनीतिमा रूस पहिलादेखि नै शक्तिशाली देश हो । पूर्वी युरोपको यो देशको मुख्य आम्दानीको स्रोत प्राकृतिक ग्यास हो । उसले युरोपमा ८० प्रतिशत ऊर्जा वितरण गर्छ । तर यस्तो धनी देशले विश्वकप फुटबल पहिलोपल्ट यसैपालि आयोजना गरेको हो ।